Fotoam-pivavahana ho an'ny virjiny: ny marina - AFRIKHEPRI
Kambon'ny virjina: farany ny marina
Ny ady amin'ny voan'ny voa - fanadihadiana (2016)
Makà lahatsoratra bebe kokoa
zoma, 3 janoary 2020
FAHASALAMANA SY FAMONJENA
FIVAVAHANA SY FIVAVAHANA
FITAFIANA sy FANAFODY
Fifandraisana FIVORIANA SY FIVAVAHANA
Ireo virjina mainty hoditra
Cny foto-kevitry ny Fitsipiky ny Feminine, izay fahagola be loatra dia ilay hazo izay manafina ny ala be dia be amin'ny fahamarinana diso.
1) Ny mistery diso sy ny lainga marina:
Voalohany, ny sasany dia mety hanontany tena raha misy ny tena fampiasana ny resaka "Virjom-mainty". Ny fanadinoina fa ny zavatra rehetra manohina ny tantaran'izao tontolo izao sy ny fivavahan'ny mponin'ny tany dia mila tombony ho antsika; fa ambonin'izany rehetra izany dia hadino ny fanadinoana fa ny kolotsaina virijina mainty dia antitra noho ny Judeo-Kristianisma! Io zava-miafina diso io dia nohazonin'ireo mpamitaka ny tantara hatramin'ny nananganana ny patriarika patriotika misogynist, ary raha maka fotoana hamakiana ity lahatsoratra ity ianao dia ho azonao ny antony nanakodiaviana antsika an-taonany maro tao anaty lafarinina!
Faharoa, tsy mbola naseho akory ny fisian'ny tany eto an-tany antsoina hoe Jesosy (izay mitovy amin'ny patriarika ao amin'ny Testamenta Taloha). Na izany aza, tsy maintsy miatrika zava-misy iainana isika: olona maherin'ny miliara, na aiza na aiza eto amin'ity planeta ity, manaraka ny fivavahana katolika romana ary noho izany dia miankina amin'ny finoana, ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny eoropeana miorina amin'ny Vatican. Na izany aza, ilaina ny manazava azy ireo ny quirks maro izay ny ideolojia fanavakavahana tandrefana izay matetika tsy iantefan'ny fanazavana momba ny literatiora, indrindra ny antony nahatonga ny fisian'ireto Madonnas mainty ireto!
2) Avy zava-miafina diso ka hatrany amin'ny fahamarinana
Raha ny marina dia tsy misy mistery ny "Virjom-borona mainty". Voalohany, andao hametraka fanontaniana marobe ireo fanontaniana marobe:
- Nahoana no mivavaka amin'ny virjina mainty ny Kristianina any Eorôpa rehefa levona ny foto-pisainana kristiana? Ny fivahiniana masina dia tena zava-dehibe amin'ny vanim-potoanan'ny vanin-taona, fa amin'ireo fotoana ireo, ny mainty dia ny ankamaroan'ny faritra misy ny diabolika.
- Nahoana no nanome ny lanjany lehibe indrindra ho an'ny Black Madonna ao amin'ny fireneny Pôlônina ny Papa John Paul II?
Fa maninona no mainty "virjiny" tranainy indrindra any Afrika, Azia ary Eropa?
- Inona no ifandraisan'ireto "Virjom-bary mainty" sy Afrika fahiny ireto, ary ny tena manokana amin'ny sivilizasiona amin'ny Lohasahan'i Neily: Kémèt sy Koush?
Ahoana no ahafahan'ny fivavahana kristianina iray mifandray amin'ny finoana Afrikana marobe?
- Nahoana no mankahala ireo tsy miaramila ireo ary nahoana no manakorontana ny mainty hoditra amin'ny ankapobeny sy ny Afrikana indrindra? Ankoatra ny vokatr'ireo andininy momba ny fanavakavahana, inona ireo antony tena mahatonga ireo asa soratra ireo? Nahoana ny mpahay tantara mpanavakavaka no manandrana manangona ny Blacks tamin'ny lasa be voninahitra ary indrindra indrindra tany amin'ny Lohasahan'i Neily?
- Inona no nialoha ny fisehoan'ny “virjiny mainty” kristiana?
- Inona no anjara andraikitry ny patriarika avy amin'ny foko leucoderm (Aryan, jiosy, hoditra fotsy arabo) amin'ny famongorana vehivavy? Ahoana no nandaozantsika ny Black Madonna ho any amin'ny Madonna White?
- Nahoana no tsy vahaolana ara-pivavahana ho an'i Kamits ny Jodaisma, ny kristianisma sa ny finoana silamo? (Ny Kamits dia mainty hoditra mahatsapa sy mirehareha amin'ny tantarany marina ary miady ho an'ny fahaterahan'i Afrika.)
3) ISIS, renibenay Primal i Gera mainty hoditra:
- Ny niaviany: maro ny asa ankehitriny no manamafy fa tsy ny homo sapiens sapiens tranainy indrindra no Afrikana (ny niavian'ny afrikana ny lehilahy maoderina dia nohamafisin'ireo mpikaroka, arkeolojia ary paleontologist) fa ankoatra izany, ny tranainy indrindra ny andriamanitra fantatra dia vehivavy mainty. Zava-misy izany ary tsy ankasitrahan'ny sasany: "Andriamanitra tamin'ny vehivavy rehetra; Andriambavy voalohany ». Ny tsy fandehanan'ny lehilahy misogynist mba hanaiky ny fanjakazahan'ny andriambavy renivohitra dia zava-misy vao haingana teo amin'ny tantara satria ny rafi-pitondran-tena momba ny filozofia, ny finoana ary ny sivily any amin'ny Tandrefana ankehitriny dia patriarka. Na izany aza, taloha kelin'ny nanam-pivavahan'ny patriarka ny jodaisme, ny Kristianisma ary ny finoana silamo, ny andriamanitra tokana an'ny olona eto an-tany dia vehivavy, andriamanitra lahy sy vavy avy any Atsinanana (soratra babylonianina, Genesisy, sns). Nandritra ny vanim-potoana prehistorika, ny tranokala arkeolojika dia namerina indray ny sary an'ohatra marobe izay nofaritana ho "Venus".
Ireo vehivavy manana vongan-jaza matavy ary be nono dia raha ny tena izy dia fanehoana ny andriamanibavy tany am-boalohany avy any Afrika, Andriambavy Universal alohan'ny "andriamanitra" rehetra hatramin'ny vanim-potoana teo aloha, ny fahabangan'ny vehivavy dia sarobidy tahaka ny an'ny tany hovelomina amin'ireto fiarahamonin'olom-pirenena ireto: hatramin'ny Paleolithic dia famokarana vehivavy izay miantoka ny fandanjalanjana ny fiainana ara-nofo ary tena voajanahary, omem-boninahitra arak'izany; tamin'izany fotoana izany, ny fivavahan'ny vehivavy no nahatonga ny fahamboniana vehivavy. Mandra-pahatongan'ny taon-taonany roa nialoha ny vanim-potoana niainanay, i Eropa sy ireo firenena any Atsinanana Atsinanana dia maneho ny maha-izy azy ireo amin'ny endrika vehivavy dia manao firaisana ara-nofo mazava tsara mba hanaisotra ny haremotra rehetra.
5.000 XNUMX taona lasa izay, dia mbola mainty avokoa ireo mpifindra monina nandao an'i Afrika, ary talohan'ny nanafika ny firenena Aryanina avy tany Azia, dia mainty ny mponin'i Mediterane sy ny andriamaniny rehetra! Misy fambolena ny Black Madonnas an'ny kristianisma vis-à-vis ny andriamanitra mainty tany am-boalohany fa koa ny fanapahana ny Kaaba, ny vato mainty Islamika vis-à-vis masina ny vato mainty volkano volafotsy (Ibla Nera amin'ny Sisily sy Cybele ao Anatolia). Any Torkia, firenena Silamo, dia misy fivahiniana masina isan-taona ho an'ny Black Madonna any Efesosy. Ndao isika hanararaotra izany hanondro ireo Madonnas mainty amin'ny toerana izay mety hahagaga ny sasany: toa an'i Kioba na ilay hita tao amin'ny Kianja Mena ao Moskoa any Rosia; na anisany Olmecs; na any Andes. Herodotus, ilay rain'ny tantara malaza (ho an'ny Eropeana), dia nahatadidy fa ny Afrikanina no voalohany nanorina Tempoly. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'ny androntsika no nanomboka nanombantombana ny katolika eoropeana nefa na dia nanala ireo andriamanitra aza ary indrindra fa tsy andriamanitry ny Tany.
- Avy amin'ny Isisma Andriamanalina ka ny Black Madonnas: nandritra ny taona arivo taona talohan'ny vanim-potoana niainantsika ary hatramin'ny taonjato dimy voalohany, ny andriamanitra lehibe any amin'ny faritr'i Mediterane dia ny andriamanitra ISIS (Asèt / Aséta), andriamanitra mainty an'i Afrika misy ny fiandohan'i Nubian. Isis dia nankalazaina tany amin'ny faritra lehibe iray tamin'ny faran'ny Antiquity sy tamin'ny fiandohan'ny Kristianisma. ISIS, Mpandova ny Black Divine momba ny fomba amam-panao hatrizay ao amin'ny fiaraha-monina afrikanina, nantsoin'ny anarana maro tany ivelan'i Afrika, ndao hotadidintsika fa ny Ana, Dana, Inana, Ishtar, sns ... any ivelan'i Nubia, faritra izay misy ny sivilizasiona niroborobo nandritra ny taonjato maro nialoha ny fananganana ny piramida tany Ejipta fahiny (Kemet), nanome ny Isis ho any Kemet, avy eo amin'ny tontolo hafa.
Tao amin'ny fitoerana masiny tany Philae, mainty sy mahafinaritra i Isis! Famelabelarana Alchimique an'ny Primordial Matter, Black Mother of Humanity ary ny mpialoha lalana an'ny Black Madonnas sy ireo izay efa voafolaky taorian'izany. Avy any amin'ny Lohasahan'i Microcosm ao Nil, ny fivavahana amin'i Isis dia tena ho lasa fivavahana iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena. Ho lasa tanàna masina ho an'ny Afrikana, Grika, Romanina ary ny mpifindrafindra monina i Philae. Ny fomban-drazana taloha avy ao amin'ny The Goddess Fertility avy any Afrika dia hialoha ny anjara asan'ny Kristianisma sy ny Silamo amin'ny Moyen Âge.
Ny sary malaza indrindra amin'ny Isis teo amin'ny sehatry ny Fanjakana Romanina dia toa an'i Isis izay nanosotra an'i Hôl (Horus) zanany lahy. Ny antokom-panjakan'ny Fanjakana Romanina, izay miaramilany dia lehilahy avy amin'ny kaontinanta telo (Afrika, Azia, Eoropa), no nitondra ny sarin'i Isis Afrikana, ary koa ny sarin'ny Isis mifangaro amin'ny Cybele, Inanna, Astarte, any amin'ny tontolo fantatra, avy any Afrika ka hatrany Asia, mankany Roma, Gaul, ny Tanin'ny Angles (Angletera), ary ny Danube. Tsaohina anarana maro manerana an'i Afrika, Azia, ny teny grika Fanjakana sy ny Fanjakana Romanina, dia fantatra amin'ny anarana hoe Isis, Hathor Maat, Sekhmet (goavana lafiny Reny ny mainty mifanitsy amin'ny vehivavy loha lioness), Yemonja (Yoruba), Athena, Artemis, Demeter-Persephone, Hera, Kali (India), Dravidian Mahadevi (Indus) etc.
Tany Meroe, Sudan ankehitriny, ny fivavahan'ny Isis dia nanome voninahitra ny fivavahan'ny andriamanitra liona Apedemek ary koa ny andriamanitra Amon. Ny Lova maintin'ny Voalohany maintin'i Afrika dia ny Fahamarinana, Fahamarinana, fiarovana amin'ny famoretana, fiarovana ny ampahorina, ary ny fananganana ny fiainana manontolo. Miaraka amin'ny Hellenization, Isis dia Renin-dranon'i Mediterane; Ny namany namany, Ousir (Asar-Ausar-Osiris-Ousiré) na ilay “Mainty Mainty” (Kem Our) lasa Zeus, Pluto na Dionysus.
Nandritra izao tontolo fantatra sy tamin'ny taonjato voalohany tamin'ny vanim-potoana Kristiana ireto, ny andevo sy ny lehilahy manan-kaja ambony dia nivavaka tamin'i Isis ho andriamanitra izay nanjaka tamin'ny herin'ny fitiavana, ny famindram-po, ny fangoraham-po ary ny fahalianany manokana tamin'ny alahelo . Taloha kelin'ny Kristianisma, ny fivavahan'ny Isis dia nampanantena fiainana aorian'ny fahafatesana teto an-tany, dia natsangana nanerana ny Fanjakana Romanina ny tempolin'i Isis, tany Gaul, Portugal, Spain, Brittany, Alemania, Italia, indrindra amin'ireo toerana izay ho lasa toeram-pitsaboana an'ny Madonna mainty. Ny toetra mampiavaka an'i Isis, izay niaraka tamin'i Christian Madonna taty aoriana, dia ny fangorahan'ny reny. Tamin'ny andron'ny Kristiana, i Horus zanany lahy dia naseho ho sarin'i Kristy. Nifandray tamin'ny Isis foana ny rano satria misy kalitao masina. Tamin'izany fotoana izany, Tompon'ny fivavahana tao Kémèt, Isis dia tamin'ny fomba "Andriamanitra Reny". Araka izany, mbola tsy nisy fizarazarana teo amin'ny vehivavy sy ny lahy. Tiany vehivavy sy lehilahy, tanora sy antitra ary kilasy ara-tsosialy rehetra. Ny toerana misy azy ao Philae dia noforonina teo anelanelan'ny taonjato faharoa sy voalohany talohan'i Kristy, dia nitondra ny sistrum tamin'ny tanana iray sy ny hazo fijaliana Ankh (mariky ny fiainana mandrakizay) amin'ny lafiny iray. Tamin'ny fisoloany azy (600 talohan'i JK) tao amin'ny Museum Cairo dia niseho toy ny reny mpitaiza mainty izay mitovitovy amin'ny sary (kisary, sarivongana, sns) ny Isisera nitaiza ny Kristianisma voalohany. Aoka tsy hohadinointsika fa ny fankalazana ny Isis, ny vadiny Osiris ary ny zanany lahy Horus, dia nanohy ny tantaran'i Farao rehetra. Isis efa nisy nandritra ny 3.000 taona mahery izao i Isis rehefa niely avy tany Meroe sy Alexandria ny kolotsaina nataony hatrany amin'ny faritr'i Mediterane manontolo. Ny Trinity "Isis / Osiris / Horus" dia ho tonga ao amin'ny Kristianisma malaza "Mary / Joseph / Jesus" izay tsy mitovy amin'ny Trinity an'ny kanôna katolika: "ny Ray / ny Zanaka / ny Fanahy Masina" (ny fanjavonan'ny singa maha-vehivavy noho ny Ny fitiavan-tanindrazana sy ny tafika ambony indrindra ny leucoderms).
Tao Memphis (Mèn-Néfèr), nankalaza ny Isis ho sivilizasiona, andriamanitra manerantany izay nanakana ny kanibalisme, nametraka ny lalàna sy ny fitsipi-pitondran-tena, ary namorona ny fambolena, ny zavakanto sy ny taratasy, ny fomban'Andriamanitra ary ny ny rariny. Isis, Magician lehibe, dia ny Jeneralin'ny fitsaboana, mpanasitrana ny aretina amin'ny maha olona, ​​mpanapaka ny kaontinanta sy ny ranomasina, mpiaro ny loza manoloana ny fanamoriana sy ny ady. Isis no andriamanitra ny famonjena Sal. Hitantsika ireo toetra rehetra ireo ao amin'ny Madonnas sy Virjom-borona mainty. Ny rahavaviny Maât dia andriamanitry ny Fahamarinana-fahamarinana. Manam-pahaizana manokana momba ny fivavahana, Lucia Chiavola Birnbaum, mieritreritra fa ny sary tranainy indrindra amin'ny Madonna of Christendom dia hita any Sicily; dia ny Black Madonna dell'Adonaï (Ny Madonna maintin'ny Adonaï); ho azy, ny toeran'ny toeram-pahamasinan'i Maria taloha (renin'i Jesosy) dia ho any Sisily. Mpikaroka iray hafa dia mihazakazaka mankany Italia (ny Basilica Saint Mary Major). Ilay mpikaroka Jean-Pierre Bayard dia miresaka momba ny Virjika mainty miverina any Frantsa amin'ny fotoana Clovis, fa ny zokiny dia hotadiavina any Afrika (ankoatra an'i Clovis dia avy any Afrika). Toa tsy hain'ny andro ny mahita ilay Madonna mainty antitra kristiana tranainy indrindra ao amin'ny Copts of Egypt. Eny tokoa, i Ejipta no firenena voalohany teto an-tany izay nanaiky ny Fivavahana Kristiana ho fivavahan'ny fanjakana. Tao Alexandria no nandikana voalohany ny teny hebreo ho amin'ny teny grika ny Testamenta Taloha. I Alexandria tamin'izay dia iray amin'ireo tanàna voalohany, niaraka tamin'i Jerosalema, mba hanana eveka. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny hoe ny mainty rehetra avokoa na ny Madonnas sy Virjiny rehetra teo amin'ny tantaran'ny kristianisma. Aza adino fa amin'izao fotoana izao, ny mainty dia tsy tompon'ny Egyptiana intsony! Ireo Madonnas ireo dia mitondra ny toetran'ireo andriamanitra sy andriambavy tany Egypta fahiny (ohatra ny voninkazo) raha ny zaza (miaraka amin'ny toetoetran'ny olon-dehibe) dia mitondra ny tehim-panjakan'i Faraona…
4) Ny famoretana ny vehivavy amin'ny leucoderms sy ny fanalan'i Madonnas:
Izy ireo no Ary Ary avy any Azia (ny Aryas, izany hoe "andriana" ao Sanskrit, miaraka amin'ny masontsivana sy maso manga) izay nampiditra andriamanitra lahy tany Eropa. Ny siviliziona Minoan sy Mycenaean izay niroborobo tany Mediterane tamin'ny fiandohan'ny millennium fahatelo al.fi tao anaty vakim-paritra iray nofehezin'ny Peloponnese, ny Cyclades sy Creta, taorian'ny nanafihana Indo-Aryan voalohany, dia mbola nanao ny fivavahan'ny andriamanibavy tokana. .
Ny Araniana ihany no nivavahan andriamanitra lehilahy; izy ireo dia niondrana voalohany tany avaratr'i India tamin'ny 3.200 al.fi, ka nahita sivilizasiona Dravidian lavitra kokoa noho ny azy ireo. Noho ny fandresen'ny tafika nifandimby dia nametraka ny rafitra fanavakavaham-bolon-koditra ny Aryans. Eny tokoa, ny teny hoe "caste" amin'ny fiteny Sanskrit dia atao hoe "" varna "midika hoe" loko ". Te hialana amin'ny fifangaroan'ireo hazakazaka hatrany ny Geniana, izay mbola antsoin'izy ireo ankehitriny hoe "ny fahalotoan'ny vehivavy". Tsy misy na inona na inona afaka mampiseho mazava kokoa fa, amin'ny filozofia Aryan, ny rafi-pirazanana fanavakavahana sy ny fahatokisan'ny tsy fahamboniana ny vehivavy no mifamatotra. Ho an'ny amiana, ny vehivavy dia raisina an-tsehatra fotsiny, ary izy ireo no manaiky an'ity rafitra ity izay miantoka ny fahamarinan'ny fiaraha-monina sy ny fahadiovan'ny fitondran-tena. Na ahoana na ahoana, ny Rig Veda dia aseho mazava tsara fa ambany ny fanavakavahan'ny Aryans ho an'ny vehivavy: “Ny fanahin'ny vehivavy dia tsy mahazaka famaizana. Tsy dia misy lanjany firy ny sainy. "
Hitantsika ao, dia roa ambin'ny folo taona talohan'ny vanim-potoana kristiana, dia voasariky amin'ny tsininy mazava, ny fitambaran'ny machismo sy ny fanavakavahana izay mampiavaka ny kolontsaina tandrefana sy tsikelikely hitarika ho amin'ny firafitry ny lehilahy Andriamanitra. Izao tontolo izao dia hatrizay hatrizay hatrizay hatrizay, avy any an-danitra mankany amin'ny helo. Andriamanitra dia ho fotsy hoditra, ary ny Devoly fahavalony dia ho tonga mainty hoditra. Ny vehivavy dia tsy mihoatra ny ambin'ireo mpiady sy ny mpiaro ny taranany. Ny mpahay tantara Diodorus dia nitatitra fa ny Aryans dia masiaka sy Kilonga miaramila sy ny "taranaka" manontolo "tia ady, ary dia vonona lalandava ny asa" sy ny tsotra loatra, dia afaka foana resin'ny fitaka . Ho an'ny Aryans, ny vehivavy voalohany mpifanandrina amin'ny lehilahy, amin'ny farany dia lasa fahavalo, alohan'ny hidirana amin'ny Evil.
Hitantsika izany fahitana izany teo anivon 'ny Jiosy fahiny, ohatra ao amin'ny epistily Paoly: "Ny lohan'ny lehilahy rehetra dia Kristy; Ny lehilahy no lohan'ny vehivavy; ary Andriamanitra no lohan'i Kristy. "Tsy ilay lehilahy, mazava ho azy, izay noforonina ho an'ilay vehivavy, fa ny vehivavy ho an'ilay lehilahy. "" Hianareo vehivavy, hanaiky ny vadiny toy ny amin'ny Tompo: tokoa, ny lahy no lohan'ny vavy ... "" Nandritra ny fanadihadiana, ny vehivavy dia tokony hangina amin'ny fankatoavana. Tsy avelako hampianatra na hanapaka ilay lehilahy ny vehivavy. Avelao izy hangina. I Adama no nampiofana voalohany, ary avy eo i Eva. Ary tsy Adama no voafitaka, izay, fa ny vehivavy no voafitaka, ka meloka amin'ny fandikan-dalàna "(1Cor 11 / 3, 1 Kor 11 / 8 ny 11 / 9, 1 Kor 14 / 34 ny 14 / 35 EP 5 / 21 ny 5 / 24, Col3 / 18, 1 Tm 2 / 11 ny 2 / 14, TT 2 / 5).
Izahay koa mahita fomba fijery io amin'ny ray 'ny Fiangonan' i Roma (oh: Augustin) sy ny Eoropeana Moyen Âge, rehefa ny vehivavy no nampangaina ho manao filalaovana ody ka nandoro velona. Ao amin'ny CORAN, toy ny ao amin'ny Torah, dia toy ambany noho ny olona, ​​ary dia izy no manao fahotana tany am-boalohany. Ny kolontsaina grika fahiny nitondra ny herisetra ity anglisy Aryan olona Nanafika an'i Makedonia sy Dalmatia ao amin'ny fanjakana arivo taona izay nialoha ny vanim-potoana Kristianina, masculinizing ary nanova ny endriky ny mainty hoditra Divne Neny, fampijaliana ary fanararaotana andevo, ary manery ny vehivavy amin'ny lehilahy. Raha mifanaraka tsara amin'ny lehilahy sy ny vehivavy kosa i Afrika. Dia lasa ny kolontsaina grika io Aryan olomangan'ny ny Eoropeana / Amerikana mpanavakavaka sy ny imperialista tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny Nazia tamin'ny taonjato faharoa-polo, miaraka amin'ny "The White ambony" sy ny mpanara-dia azy ankehitriny, izay hanohy hamokatra sy hanaparitaka ny fanavakavahana .
Na dia eo aza ny fandravana ny tempoly ny Isis ny mpanjaka romanina sy ny fianakaviana amin'ny Kristianisma (ny fahatsiarovana ny maizina ho reny dia transmuted ny fankamasinana ny Our Lady, indrindra fa ny mainty hoditra sary), ny lova ny Black Reny nikiry Art: Maria Virjininy mainty hoditra any Eoropa sy ireo vehivavy mainty hoditra andriamanitra eto amin'izao tontolo izao dia porofo ny lalina sy maharitra fahatsiarovana ny mainty reny avy any Afrika na dia eo aza ny patriarika fivavahana toy ny Judeo-Kristianisma sy ny finoana silamo . Talohan'ny nahatongavan'ireo vahoaka aryanina, ny vahoaka Mediterane dia teo ambany fahefan'ny Afrikana. Tonga tany Malta, Gresy, Sicily, ary atsimon'i Italia ny herisetra taorian'i 2.500 BC. AD dia nanafika ireo faritra ireo ny Arabo. Ohatra tao Malta, ny mpanafika dia manolotra milamina ny olona izay nandevina ny maty manohitra ny Aryan varahina mpanafika izay nampiasa fitaovam-piadiana, ary nodorana ny maty. Nametraka ny rafitry ny patriarka ho an'ireo vahoaka trotraka izy ireo (Malta, Sicily, sns.).
Be tatỳ aoriana, ny Romanina tonga hiady ny mponin'i Carthage (mainty, Afrikana-Kananita) Ary ny mpanjaka Byzance 'ny Fiangonana Atsinanana nametraka ny patriarika papa Kristianina. Tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo, ny Espaniola mpanafika nitondra ny Fitsarana Katolika any Malta sy Sisila. Na dia eo aza izany rehetra misdeeds, ny fahatsiarovana ny primordial mainty nanohitra reny sy mitohy amin'izao fotoana izao (ny mifangaro ny Afrikana Isis amin'ny Anatolia Cybele, ny Kananita Astarta, ny Carthage Tanit, sy ny mainty Maria Virjininy)! Ny Kananita sy ny Sumerians no anisan'ny voalohany mainty hoditra (Homo sapiens sapiens) avy ao Afrika: ireo zava-misy dia nohamafisin'ny fototarazo (ohatra, Cavalli-Sforza de Al Tantara sy Jeografia ny Human fototarazo.). Ny Sumerians niantso ny tenany ho "olombelona mainty loha" raha ny Kananita ny Grika hoe Fenisianina, tsy toy ny Grika, tsy manana Mania ny fanafihana. Grika sy romanina herisetra nanafika voalohany sivilizasiona herisetra, ny an'ny primordial Black Neny.
Eurocentric mpahay tantara maoderina, izay antsoina hoe ilay raharaha tatỳ aoriana, afa-tsy ny sibyls (prophetesses vehivavy) ny Efesosy, any Azia Samos any Gresy, Cumae akaikin'i Naples any Italia, tsy nilaza hevitra ny Afrikana Sibyl Libiana. Fialan-tsiny mety hanamarika ny fiandohan'ny fanilihana ara-tantara ny afrikanina Afrikana amin'ny sivilizasiona manerantany. Kanefa ny Sibyl rehetra dia mampahatsiahy ny renim-borona mainty sy ny soatoaviny. Io vehivavy nentanim-panahy io no nampita ny andriamanitra tamin'ireo andriamanitra. Ireo Madonnas sy Black Virgins koa dia mijoro ho vavolombelona ny amin'ny fanoherana ny sivilizasiona voalohany ny tahiry Afrikana manohitra ny filozofia nosy.
- Fandehanana sy fandringanana ny Madonnas mainty: olona maro (kristiana sy tsy kristiana), amin'ny alàlan'ny fanavakavaham-bolonkoditra, no te-handinika fa ny Black Madonnas (an'i Marie / Maria) dia hafa firenena amin'ny fomban'ny Kristianisma voalohany. Nisy ny sasany (na eveka aza): "Mainty ny sarivonganay satria efa am-polony taona maro ny setroky ny labozia nirehitra teo anoloany dia nanamaizina azy ireo". Saingy tsy afaka nanazava ny antony mainty ireo faritra ao amin'ny vatana (tarehy, tanana), ny akanjo ary ny fotsy amin'ny maso dia tsy nitafy (mety ho voafantina ny labozia, mahalala izay ampahany amin'ny sarivongany tiany mainty)! Ny sarivongana rehetra dia tokony ho mainty raha marina ireo. Avy eo dia nametraka ny antony hafa toa tsy mikorontana ihany izy ireo, saingy ilaina ny mahatsapa fa mainty ireo sarivongana ireto satria ny olona nanamboatra sy nametraka azy dia maniry azy ireo, ary azo antoka kokoa fa ireto Virjiny mainty ireto dia maro kokoa.
Noho izany dia nanomboka nandoko ny sarivongana (na sarivongana) izy ireo. Be dia be ireo “virjiny fotsy fotsy” (matetika nataon'ny pretra). Ilay mpikaroka Jean-Pierre Bayard dia mitanisa ireo lehibe indrindra: ny an'i Dijon, Moussages, Villeneuve-lès-Avignon, Laroque, Pelussin, Rochefort-en-Terre, Manosque, Notre-Dame de Vauclair any Molompize ... Ny hafa "Virjiny fotsy sy volamena. Hita any Tournus, Avioth, Chappes. Ny hafa kosa nopotehina, nodorana, nalevina, notoraham-bato, nangalatra na nanjavona. Tamin'ny 1794, ny tsangambato taloha kelin'ny Black Virgin of Notre Dame du Puy dia natsipy tamina pyre ary nodoran'ny kiaka hoe: "olona Egyptiana! ". Ho an'ny Protestanta dia tsy maintsy omena an'i Kristy ny fankalazana ary "tsy finoanoam-poana izay manome voninahitra ny Virjiny". Ny Protestanta dia mihevitra fa "ny Virjika Mainty no tafavoaka velona amin'ny fanompoana mpanompo sampy izay te hanongotra an'i Marie". Noho izany dia angatahina izy ireo ny hamotika ireo sary ireo, indrindra ny an'ny "Virjin'ny mainty, satria manelingelina ny fahatsapan'ireo mahatoky ary mitazona azy ireo amin'ny tantara tsy fantatra amin'ny soratra masina". Ohatra iray hafa dia ny tantaran'ny Black Virgin avy any Czestochowa any Polonina izay tsy sarivongana fa latsaka amin'ny sokajy kisary; tena nomem-boninahitra ny Papa John Paul II izay nandinika azy io mihoatra noho ny zava-drehetra ary niteraka fitsangantsanganana manan-danja izany satria, hoy izy, i Saint Luke dia nandoko ny endrik'i Maria tamin'ny hazo hazo kypreso telo izay avy amin'ny "latabatra. tafiditra ao anatin'ny fianakavian'ny fianakaviana Nazorene, latabatra izay voalaza fa i Yahoshuah ha-Notzri dia nilaza fa nankalaza ny Fanasan'ny Tompo tamin'ny harivan'i Maundy Alakamisy ”. Io fanala baraka io dia nohamasinin'ireo mpandroba tamin'ny 1430 ary ny tarehin'ny "Virjiny" dia voatsatoka sabatra. Ity kisary Byzantine naverina tamin'ny laoniny tamin'ny fomba eoropeana ity, izay niainga tamin'io fotoana io "fanalefahana ny endri-javatra, modely modely".
Farany, dia tsy navoakan'ny Vatican ny fanamboarana an'ireto Madonnas mainty ireto. Ny Eglizy Romana dia matahotra ny hivadi-pinoana sy ny mpanompo sampy. Matahotra ny ho aingam-panahy avy amin'ny Apocrypha, ny taonjato faha-4 dia nandrisika ny sary stereotypika misy "virjiny" amin'ny plaster izay miloko manga sy fotsy, tsy misy fihetseham-po manokana amin'ny mpanakanto. Ilaina ny manavaka tsara ny antsointsika hoe "présidentisme kristiana" (manintona ny evanjely, indrindra indrindra ny evanjelika apokalifa) sy ilay antsointsika hoe "ny kristiana, fotsy, tsy misompisialy, fotsy-baiboly, fiangonana Judeo-Kristiana. , Romanina, Paulian ”(manondro ny hevitr'i Md. Paul, indrindra amin'ireo epistily sy ireo evanjelisitra XNUMX momba ny kanônika, natsangany noho ny filana ny antony). Ary noho ny antony tsotra indrindra: raha miteny toy ny "Fiangonana Kristiana" isika dia mieritreritra ny Tandrefana sy ny zavatra ratsy rehetra nataony (fanandevozana, famonoana andevo, fanjanahana Franco-afrikanina, fandrobana ny loharanon-karena sy fitaovana manta, sns ...) . Fa rehefa miresaka momba ny "présidentisme kristiana" isika dia mieritreritra ny fitambaran'ny filazantsara rehetra (apokrifa na tsia) ary ny hafatra voalohany ihany no mahaliana antsika eto. Eny tokoa, ny "kristiana primitip" dia famoronana radikaly miaraka amin'ny Jodaisma sy ny Testamenta Taloha raha "ny Eglizy romana fotsy-Baiboly" dia maniry ny hametraka fitohizan-tena eo amin'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Ny Apocrypha ny "Kristianisma voalohany" dia manome lanja ny vehivavy ary miaro ny fitoviana eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy, fa ny fiangonana Paulianana diso dia nanao demonia sy ambany, izay manome lanja ny fanandevozana sy ny fanandevozana. Hevitry ny fanavakavahana "olona voafidy".
Manohitra tanteraka ny tsy fisian'ny fanajana ny Vehivavy izahay: ny toerana nomena an'i Maria tao amin'ny Eglizy Katolika dia vao haingana (toerana nolavin'ny Protestanta io toerana io). Ny epistily nosoratan'i Paoly dia tsy niraharaha an'i Maria ary nanamavo ilay vehivavy. Ao amin'ny Filazantsaran'i Marka dia tsy miresaka afa-tsy indroa i Maria. Ny Filazantsaran'i Matio dia tsy mamarana ny tetiarany tamin'i Maria saingy tamin'i Josefa (izay ho vadin'i Maria). Tsy tonga any amin'ny hadalàna ny Filan-kevitry ny Efesosy Jona 22 431) izay nambara Maria Renin'Andriamanitra, andrana mba hanonerana lehilahy Andriamanitra telo izay iray ny Kristianina: "Ray, Zanaka sy Fanahy Masina", izay manolo tany am-boalohany Andriamanitra telo izay iray " Ray, reny ary zaza ".
Ireo Evanjely apokrifa momba ny Kristianisma voalohany izay manome lanja ny vehivavy dia tsy aseho amin'ny Fiangonana Patriarka Romana. Na dia nisy aza evanjely nosoratan'ny vehivavy. Ny fiangonana White-Biblical no nanonona Evanjely efatra monja izay napetraka tao amin'ny saosy hebreo.
Voarakitra tampoka sy voatsikera tao amin'ny 1854 ny fanambarana ny foto-pinoana nataon'ny Papa Pius IX izay noporofoin'ny tsindrin'I Horis zanak'i Isis izay niteraka azy.
Ny tsofa Ankh no manambara ny hazo fijalian'i Kristy, na izany aza ny marika Kristiana dia tsy manana ny oval vavy.
Noho izany dia tsy afaka manome trosa an'ity kapila maloto sy ratsy ity izahay izay monopoliaka ny zavatra ilainy ary manilika izay manelingelina azy.
Ny Eglizy Romana White-Baiboly dia nampifanaraka ny fampianarany tamin'ny fomba amam-panao taloha izay tsy azon'i Aryan fotsy, izay am-boalohany. Hanombohana dia nisy ny fanodikodinana sy ny fanerena ihany koa ny fananganana (manohitra ny toetran'ny Leucoderms). Izany rehetra izany dia tsy haharitra mandrakizay! Taorian'izay dia be dia be ny fanodikodinana na Judaization an'ireo lahatsoratra, lainga, fanendrikendrehana indrindra amin'ny vehivavy, any Ejipta ny firenen-mainty mainty ary an'i Sumer.
Tsy tokony hohadinoina fa ny vahoaka iray, ara-psikolojika ara-psikolojika, dia maneho ny maha-Andriamanitra azy amin'ny endriny. Araka ny voalazan'i François Ribadeau Dumas dia tsara izany: "Ny solontenam-panjakana no solontena avy any an-toerana". Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mainty hoditra Isis satria mainty hoditra (olona ara-psikolojika) ny vahoakan'i Ejipta fahiny. Etsy andaniny kosa, tsy misy olana amin'ny vahoaka iray naorinôtika na ny vahoaka manindrahindra loatra amin'ny kolontsaina, mba hamantarana ireo andriamanitry ny olona izay manapaka azy ara-kolontsaina, ara-toekarena na ara-tafika.
Omaly no raharaha tany Eropa: maninona no manodidina ny taona 1498 tany Eropa - ary indrindra tany Frantsa - no tsangambaton'ny loko mainty antsoina hoe "Virjiny Mary", izay misy ny hazakazaka fotsy? Maninona no mandrapahatonga ny fanjakan'i Charles VIII dia nanao fisaonana fotsy ny mpanjakavavin'i Frantsa? Tamin'ny XNUMX izy vao niova io fomba fanao io: tamin'ny fahafatesan'i Charles VIII dia nitafy mainty i Anne avy any Brittany. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa tany Ejipta fahiny, ny fotsy dia ny lokon'ny fisaonana (akanjo an'i Osiris, andriamanitry ny maty; ampongam-bady, sns).
Nataon'ny Gauls ny sarivongan'i ANA, ny andriamanibavy Isis, ny andriamanibavy panthe, tao anaty lakolosy mainty ary ny mpanjakan'ny Frantsa izay nalaza ho tena mpino toa an'i Louis XI nandositra nalatsaka tamin'ny fangatahana ny tenany tamin'ny "Black Madonna" ao amin'ny Notre-Dame de Béhuard .
Tsy nisy na dia ny endriky ny "fotsy Virjiny" sarivongana izay blacked ho an'ny sarobidy ary hanorina bebe kokoa ny fivahiniana masina mba hampivelatra ny fomba be karama (Virgin in Marsat, Clermont-Ferrand, Brioude). Satria ny fanavakavahana na tsia dia malaza ny hery manasitr'ireo Madonnas mainty ireo ary nomem-boninahitra izy ireo (Fahagagana, maro ny exoto no maneho ny fankasitrahana ny mpino, sns ...). Ambonin'izany, tsara ho marihina fa saika ireo virjina mainty hoditra rehetra ireo dia hita eo akaikin'ny lohataona mahagaga. Ny Fiangonana Fotsy dia nanaiky ny fivahiniana masina ho an'ny "Virjiny mainty hoditra" nefa tsy nanakiana ny antony mahatonga ny henatra toy izany na amin'ny alalan'ny famoahana ny zava-misy.
Noely ny Kristianina, dia nampitabataba ny 25 Desambra nandritra ny taonjato fahefatra, fanoloana ny fankalazana ny nahaterahan'i Horus, ankalazaina ao Alexandria amin'ny daty iray ihany, ny 25 December (29 Khoiak), antoko nanonona ny didim-panjakana navoakan'ny Ptolémée Kanopé III Évergète ny taona 238 av. AD
Ny fampihorohoroana an'i Osiris dia azo ampitahaina amin'ny fitiavan'i Jesosy, saingy ny andraikitra tena lehibe nataon'i Maria Magdalenian dia novonoin'ny Fiangonana Patriarka White-Biblical. Ny filazantsaran'i Maria dia tsy nosoratana.
Talohan'ny nahatongavany ho toeran'ny Jodaisma, ny Tendrombohitra Sinay dia nantsoina hoe Tendrombohitr'Andriamanitra ary tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Bronze Age of Culture Africa hatramin'ny nanakona ny Sanctuary of Har Karkom. Eny tokoa, tendrombohitra masina iray izy io ... lehibe tokoa ... ho an'ny mainty! Ny mpahay siansa momba ny dia arkeolojika notarihan'i Emmanuel Anati dia nanakorontana ny fahamarinana ara-baiboly nosoratina teto. (Noho ny fitarihan'ny filozofianana Kémèt Afrikana amin'ny kristiana voalohany sy ny Islâm tany am-boalohany, manoro hevitra anao izahay hanondro ny asan'ny Profesora Sarwat Anis Al-Assiouty).
Androany aty Afrika, ny pretra negro ary ny pasitera tsy misolo toerana nanolo ny misionera fotsy omaly. Ireo olona navetavetaina noporofoin'ny finoana ninoany dia nanolotra ny andriamanitr'izy ireo ho an'i Jesosy fotsy izay miady amin'ny demonia amin'ny fivavahana afrikana, ohatra ny Voodoo any Benin. Mahagaga ny mahita ireo Afrikanina izay manao teoria fanavakavahana mbola nafoin'ny Vatican izay manaiky anio fa Voodoo dia fivavahana hafa! Tany Benin, teo anelanelan'ny 2004 sy 2005, dia tsy nisy latsaky ny 500 fiangonana vaovao. Ireo Loharanom-po ireo, mpanompo be zotom-po amin'ny andriamanitra karazana Aryan fotsy, dia misy mitady vola sy hanala ny malemy sy ny tsy manan-tsaina, ary fantatsika tsara eo amin'ny toerana avo fa ny olona matory dia tsy miraharaha tsara kokoa ny kolikoly.
Famaranana: Andriamanitra - ny fiheveran'ny olombelona ny saina - ho toy ny mpamorona tsy manam-paharoa sy masculine tsy mbola nisy foana. Ny zanak'olombelona voalohany dia nahafantatra ny fiheverana an'ilay Vavy mainty mainty, renim-pianakaviana voalohany talohan'ny andriamanitra lahy: "Andriamanitra no andriamani-bavy voalohany". Ny fivavahana Ejipsiana dia natokana mandra-pialan'ny herin'i Kemet toerana lehibe ho an'ny andriamanibavy ASET-ISIS. Io andriamanibavy Afrikana mainty io dia avy amin'ny fisian'ny Madonnas sy Virgins Noires. Ny Kristiana "Notre Dame" dia mandoa ny zavatra rehetra ho an'ny andriamanjaka Meny sy Primal African Black. Tonga amin'ny fahatokisana isika: ny mainty Madonnas sy ny "virjina" eo amin'ny tantaran'ny Kristianisma dia mainty. Io haizina io indrindra dia vokatry ny firaisana amin'ny fivavahana amin'i The Goddess Black Goddess miaraka amin'ny fombam-pivavahana an'i Maria (Maria) avy amin'ny Kristianisma voalohany, izay antony isehoan'ny maha-fahazàrana ny toetr'andro Alchemika ho amin'ny ho avy ny ho avy. I Jesosy, zanak'i Maria, dia manana ny toetran'i Isar-Osiris vadin'i Isis mifangaro amin'ny karazana horonan-tsarin'i Hor-Horus, zanak'i Isis.
- Voalohany dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny filozofia Afrikana Kémèt momba ny Kristianisma voalohany sy ny Islâm voalohany, fa amin'ny farany (ankehitriny) fanakorontanana be loatra ny fitsipika voalohany, indrindra ny anjara asa tokony hatao singa maha-vehivavy sy ny filozofian'i Maât. Ny jodaisma, ny fiangonana katolika romana (ny an'i St. Paul) sy ny Islâm dia mpamokatra ny faharatsiana rehetra tamin'ny olona mainty: ny demokrasia dia nanosika ny mainty. Ny Fiangonana Kristiana - izany hoe ny Tandrefana - sy Islâm, hatramin'ny nandresen'ny Arabo ny Afrika, dia nandevozin'ny Negro ary mbola androany, ny West dia mbola manenjika ny Afrika ary mamabo ny harena voajanahary.
- Na dia eo aza ny fikambanan'ny Black Stones (ela talohan'ny Kaaba, vato mainty mainty any Islâm) dia avy any Afrika no niaviany ary hatramin'izao androany Madonnas mainty izao no "nanohitra", toy ny any amin'ny Kristianisma any Eoropa (Alemana, Aostralia, Belzika, Espaina, Frantsa, Grande-Bretagne, Holandy, Hongrie, Italia, Luxembourg, Malta, Polonina, Portiogaly, Romania, Rosia, Sicily, Soisa, Tsekôslôvakia), ao amin'ny tontolo Miozolmana (Alzeria, Torkia).
- Ireo Araniana niaraka tamin'i Rig Veda sy ny jiosy niaraka tamin'ny Torah dia toa nampiditra ny fanavakavahana voalohany fantatra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ireo olona ireo dia nanambara ny tenany ho ambony na "olona voafidy", "foko lehibe". Nataon'izy ireo ny demony ary mainty ny loko. Ny ady sy ny entana ara-nofo dia voamarina hatramin'ny hevitra fa "ny anton'ny mahery indrindra no tsara indrindra, satria ny zo avy amin'Andriamanitra no ahazoana ny fandresena. Ireo andriamanitra manetsika ny tenany amin'ny sabatra ary ny mpifidy dia tsy maintsy mandresy ary noho izany dia mamono olona. Noho izany, ny angano Ejipsiana-Sumerian-afrikanina dia mandalo mandritra ny taona arivo farany ny fahatafintohinana indroa ny Kristianisma amin'ny saosy Eropeana (Judeo-Kristianisma tsy afangaro amin'ny présidentitiota voalohany) sy ny fananganana Islamisma amin'ny saosy Arabo. Ireny fivavahana vaovao ireny dia voarakitra ao anatin'ny fiaraha-monina patriarka izay nanala ny fiheverana ny reny / andriambavy mainty avy any Afrika, ny filozofia milamina ary ny maha-zava-dehibe ny vehivavy amin'ny tena fandrosoana ny maha-olombelona, ​​miaraka amin'ny vokatr-sazy, ny famongorana ny karazana.
- Ny Patriarka Ady Lehibe ary ny Semitic no nandroaka ny matriarivony milamina saingy ny fahatsiarovana ny andriamani-bavy tokana dia mitoetra ao amin'ny firenena maro. Na dia izany aza, androany any Afrika, dia maintimainty mainty sy vola no manjary miaro ny fivavahana kolonialy. Ny fiverenana any Afrika fahiny dia tsy maintsy ilaina.
- Hijanona ny hanaisotra ireo mpandroba an'i Afrika ary hanampy ny famoriam-bahoaka eo anelanelan'i Kamits mba hampiray ny firenena Afrikana amin'ny fanavaozana ny Kaontinanta Malala.
Tamin'ny famintinana farany: tamin'ny voalohany ny vehivavy dia andriamanibavy mainty ary i Afrika dia nisafidy izao tontolo izao.
PS: Natokako ho an'ny vehivavy rehetra ampahorina, fanolanana, fampijaliana ataon'ny lehilahy ary amin'ny rafitry ny patriarka - ity lohahevitra ity! - amin'ny vehivavy rehetra maty noho ny herisetra ataon'ny olona. Enga anie hahita ny fanahin'izy ireo, noho io lahatsoratra io, fitsaharana mandrakizay na manantena fiovan'ny radikaly fa koa ny fahatokisana fa miady eto isika dia ady ara-dalàna hametraka ny Vehivavy amin'ny mpandeha an-tongotra izay tsy tokony havela navelany!
"Ny fahamarinana dia toy ny afo; Mirehitra sy maharary izany; saingy tsy hisy revolisiona raha tsy manafaka ny vehivavy. Tsy misy fanafahana vehivavy tsy misy revolisiona ". Ankh, Oudja, Seneb!
• Cheikh Anta Diop, Sivilizasiona na Barbary, Famoahana Afrikana Famoahana, 1981
• Cheikh Anta Diop, Anjara-tsoratry ny Sivilizasiona Neger: Ny Marina sa Tantara ara-tantara? Fanatrehana ny famoahana an'i Afrikaine, 1967
• Cheikh Anta Diop, Afrika Afovoany Afrikana, Fanontana Africaine Publishing, 1960
• Ivan Van Sertima, Nialoha ny Columbus, Ny fisian'ny Afrikana tany Amerika fahiny, New York, Random House, 1976
• Chancellor Williams, Fandringanana ny sivilizasiona mainty, World Press Press, 1974
• Runoko Rashidi, Tantaran'ny Afrikana Afrikana any Mills, Global World Publishing, 2005
• Martin Bernal, Black Athena, Ny Foko Afro-Asiatin'ny Sivilizasiona Klasika, ny Editions Presses Universitaires de France, Volume I, 1987 ary Boky II, 1991
• Dominique Arnauld, Tantaran'ny Kristianisma ao Afrika, Publié par Carthala, 2001
• Roger Garaudy, Fampihorohoroana Tandrefana, Al Qalam Publishing, 2004
• Sarwat Anis Al-Assiouty, Fikarohana mifandraika amin'ny Kristianisma tany aloha sy Islâm Prime, Volumes I (1987), II (1987) sy III (1989), Éditions Letouzey & Ané
• S.Cassagnes-Brouquet, Virjiny mainty hoditra, Éditions du Rouerge
• J. Huynen, The Enigma of the Virgins Black, Éditions JMGarnier
• Jacques Bonvin, virjina Noires: avy any an-danitra ny valiny, Éditions Dervy
• Gerald Messadié, Tantaram-piainana manontolo, Éditions Robert Laffont, 1997
• Lucia Chiavola Birnbaum, renim-pianakaviana mainty, mpanoratra safidy fanaovan-gazety, 2001
• Jean-Pierre Bayard, andriamanibavy reny sy virjina mainty, Éditions du Rocher, 2001
• Roland Bermann, virjina mainty, virjiny voalohany, Editions Dervy, 1993
• Laurence Albert, Ny Copts, Ny finoana ny tany efitra, Editions de Vecchi, 1998
Mifandraisa amin'ny fanavaozana ataontsika
I Kaaba dia mety hisy vato mainty nentin'ny Arkanjely Gabriel
Ny fahatsoran'ny tena Fanahy - Mooji (Video)
Mety hahaliana anao ianao
Lalàna masina araka ny filamin'ireo izay enjehina
Raha haneho hevitra, tsindrio eo amin'ny kisary sosialin'ny safidinao
fanehoan-kevitra manarakavaliny vaovao momba ny fanamarihako
Mividianana PRODIM-MAVA AMAZON
AOAZY NY ARTIKO ANAO
Kitiho eo amin'ny kisary sosialy raha te-hamoaka lahatsoratra.
Foundation Afrikhepri de Hitan'ny mpahay siansa fa ny fifadian-kanina dia miteraka fanavaozana ny sela: "Manampy amin'ny fiarovana ny aretin'ny atidoha ny fifadian-kanina. Ny fifadian-kanina dia mampihena ny mety ho aretim-po sy ..." 24 jona 22:48
Foundation Afrikhepri de Serena Williams dia manamboatra sekoly any Oganda, Zimbaboe, Kenya ary Jamaika: "Misaotra anao Serena tamin'ny fanoloranao ny fampianarana any Afrika!" 24 jona 22:40
Foundation Afrikhepri de Ny Bhagavad Gita (PDF): "Ny Bhagavad Gîtâ, lahatsoratra lehibe amin'ny filozofisma hindoa sy ny filozofia Indiana, dia iray amin'ireo soratra fototry ny Vedânta, tao amin'ny…" 24 jona 22:21
OREO VAVOLOMBELON’NY FIVORIANA
Ilaina ny saha rehetra. Hita tao amin'ny
Tsindrio raha hanidy ity hafatra ity!
Ity fikandrana ity dia hikatona ho azy ao anatin'ny segondra 3
Tsindrio eto raha hametraka fanehoan-kevitra ...x